Ukraine Oo Waqtigii Dhimashada Dishay 10 Ciyaartoy Oo Sweden Ah Una Gudubtay Wareegga Siddeedda - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaUkraine Oo Waqtigii Dhimashada Dishay 10 Ciyaartoy Oo Sweden Ah Una Gudubtay Wareegga Siddeedda
Ukraine Oo Waqtigii Dhimashada Dishay 10 Ciyaartoy Oo Sweden Ah Una Gudubtay Wareegga Siddeedda
Xulka qaranka Ukraine ayaa u gudbay wareegga siddeedda tartanka qaramada Yurub ee Euro 2020 iyagoo noqday dalkii ugu dambeeyey ee marxaladdaas u gudba, kaddib markii ay 2-1 kaga badiyeen Sweden oo toban ciyaartoy ku dheelayay.
Ciyaar lagu daray 30 daqiiqadood oo dheeraad ah ayay Ukraine ku xaqiijisatay guusha daqiiqaddii 120aad, xilli ay socotay daqiiqaddii ugu dambaysay, isla markaana labada waddan ba isku diyaarinayeen rikoodheyaasha.
Ukraine ayaa gool la hormartay ciyaarta, waxaana daqiiqaddii 27aad u dhaliyey laacibka Manchester City ee Oleksandr Zinchenko, hase yeeshee masii waarin goolkaasi, waxaana ka hor intii aan loo bixin waqtiga nasashada goolka barbarraha la timid Sweden oo uu u dheliyey Emil Forsberg oo saxeexay goolkiisii afraad ee tartanka.
Labada waddan ayaa fursado badan iska lumiyey, waxaana inta badan lahayd Sweden oo kubbado loo fishay inay gool yihiin uu nasiibku ka diiday.
Forsberg ayaa qaybtii dambe birta ka jaray kubbad awood badan oo uu dhaafiyey goolhayaha, waxaana 90kii daqiiqadood ee ciyaartu ay kusoo dhamaatay 1-1.
Soddon daqiiqadood oo dheeraad ah oo lagu daray ayaa musiibo ku noqday Sweden, waxaana dardar iyo ciyaar sarraysa la timid Ukraine oo la moodayay inay ciyaarta hadda uun bilowdeen, halka Sweden ay daal iyo kala-daadsanaan ka muuqatay.
Sweden ayaa waxay si dhab ah u burburtay daqiiqaddii 98aad markaas oo kaadh cas oo toos ah loo taagay Marcus Danielson, waxaanay taasi sii xoojisay awoodda Ukraine.
Daqiiqaddii 120+1 ayay Ukraine la timid goolka guusha oo uu madax ku dhaliyey Artem Dovbyk oo xerada ganaaxa ka helay kubbad uu dhinaca bidix kasoo qaaday xiddigii ugu fiicnaa dalkaas ee Oleksandr Zinchenko.
Ciyaarta ayaa kusoo dhamaatay 2-1 ay guushu ku raacday Ukraine, waxaana tartanka ka baxday Sweden oo ka mid ahayd dalalka awoodda badan ee la filayay inay u gudbi doonaan wareegyada xiga.